लोकप्रियताको लागि विवाहित अभिनेतासँग डेट ! - Purbeli News
लोकप्रियताको लागि विवाहित अभिनेतासँग डेट !
प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक ११, २०७४ समय: २१:१४:०९
नयाँ दिल्ली / भारतीय अभिनेत्री रिचा चड्ढाले आफूलाई लोकप्रियताको लागि विवाहित अभिनेतासँग डेटिङको सुझाव आएको खुलासा गरेकी छिन् । एक अन्तर्वार्ताको क्रममा रिचाले फिल्मी उद्योगमा लोकप्रियता कमाउनको लागि अभिनेता वा क्रिकेटरहसँग डेटिङको सल्लाह दिइने गरेको बताएकी छिन् । उनले करियरको सुरुवातमा यस्ता धेरै अफरहरु आएको खेलासा गरेकी हुन् ।
रिचाले आफ्नो करियर दिवाकर बनर्जीको फिल्म ‘ओए लकी लकी ओए’ बाट सुरु गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनलाई ‘गैंग्स अफ वासेपुर’मा पनि काम गर्ने मौका मिलेको थियो । उनले फिल्मी क्षेत्रमा सुरुवातमा आउँदा सही सल्लाह दिने मानिसहरु नभेटिएको गुनासो गरेकी छिन् । उनले आफूलाई के गर्नुपर्छ र के गर्नुहुँदैन भनेर सही सल्लाह दिने मानिसहरु नभएको बताइन् ।
रिया चड्ढा आफ्नो फिल्म ‘जिया और जिया’ को प्रतीक्षामा रहेकी छिन् । यो फिल्ममा उनको साथमा कल्की कोचलिन पनि रहेका छन् । यो फिल्ममा दुवैको नाम जिया और जिया रहेको छ । आगामी २७ अक्टोबरमा यो फिल्म सार्वजनिक हुँदैछ ।